Zoom App for Windows 10 - Ungalanda Kanjani & Ufake? - Pc
Sondeza uhlelo lokusebenza lwakamuva kanye newebhusayithi yokwenza ukuhlangana oku-inthanethi kwenani elikhulu labantu. Isetshenziswe kabanzi, ikakhulukazi ngesikhathi sokukhiya. Ukusebenzisa i-smartphone yakho kungacasula iso lakho futhi kwehlise nokubona kwakho, ngakho-ke mhlawumbe ufuna indlela yokusondeza amafasitela 10.
Imihlangano eku-inthanethi yayijwayele ukuba sezweni, kepha yayingavamile. Kepha i-COVID-19 isenze safunda okuningi, ikakhulukazi uma kukhulunywa nge-e-learning. Esinye sezipho ezinhle kakhulu ubuchwepheshe esasinika zona ngonyaka ka-2020 kwakuyisikhungo se-inthanethi.
Izinsizakalo ze-Intanethi zisisizile ukuthi siqhubeke nezifundo zethu nebhizinisi ngezinga elikhudlwana. Kepha asikwazi ukusho ukuthi yi-intanethi kuphela enesibopho sokwenza i-e-learning inokwenzeka. Amathuluzi esasinawo amakilasi, imihlangano, neminye imisebenzi yadlala indima ebalulekile ekwenzeni ukuxhumana, ukufunda, nokuthengisa noma ukuthenga kube nokwenzeka.
Ukusondeza kungenye yalawo mathuluzi asetshenziselwa imihlangano ngezigaba ezahlukahlukene. Ngakho-ke, ungahle ucabange ukuthi kufanele ube ne-Zoom for windows 10 ukuze ukwazi ukujabulela izingcingo zevidiyo eziningi nemihlangano yevidiyo noma yomsindo esikrinini esikhulu.
Sondeza iWindows 10 - Isingeniso
Ukusondeza kuyindlela engcono yokwenza umhlangano wabantu abaningi. Isetshenziswe kabanzi emhlabeni jikelele ngamanyuvesi, izikole, namakholeji ukufinyelela i-e-learning ngokwenza ama-zoom meetups. Inezici eziningi ezikwenza ihole ngaphezu kwamanye amapulatifomu womhlangano. Inomphathi, osiza othisha, abaxhumanisi, noma omunye umuntu onegunya ukubamba ukulawula noma kuseshini eku-inthanethi.
Ibuye inenketho yokurekhoda, futhi ingakusiza ukuthi ubheke kunketho yokuthula noma ukuthula lapho ungalungisa khona ukukhululeka kokufunda kwakho.
Izinyathelo Zokulanda Nokufaka Ukusondeza:
Ukulanda ukusondeza Windows 10 kungenziwa ngokulandela izinyathelo ezimbalwa ezilula, njengokulandelayo:
Isinyathelo sokuqala ukuvula ikhompyutha yakho bese uvula noma yisiphi isiphequluli sewebhu osisebenzisayo. Manje iya ku sondeza.us .
Isinyathelo sesithathu sifaka ikhasi lokulanda. Uzofika lapha nenketho ebhalwe ngokuthi 'landa' ngaphansi kwe- 'Zoom Client for meetings.' Chofoza kuzo.
Ngemuva kokuthi wenze isinyathelo sesithathu, i-Zoom izoqalwa ukuze ilandwe kukhompyutha yakho. Isinyathelo esilandelayo ukuqala ukufaka ukusondeza.
Ngemuva kokuthola ukusondeza amawindi 10 kwi-PC yakho noma kwi-laptop, isinyathelo esilandelayo kungaba ukubhalisa nje uma umusha ukusondeza, noma ungangena ngemvume uma ungumsebenzisi wakudala.
Ungamema noma ngubani ngokwabelana ngesixhumanisi.
Iyakwazi ukurekhoda imihlangano.
Akunakho ukulawula ukuphawula.
Izinketho zamazwana ezizimele zingaphambukisa izitshudeni noma ababekhona.
I-Zoom iyipulatifomu yomhlangano ehamba phambili yokwenza noma iyiphi ingqungquthela noma ukuhlangana. Kube ngumthombo omkhulu wokufunda ngesikhathi sesikhathi sokuvala lapho umhlaba wonke uvaliwe. I-Zoom isize inhlangano ehlobene nayo yonke imikhakha yempilo ukuxhumana ngezikali ezinkulu ngokuhlangana komsindo nevidiyo esezingeni eliphakeme.
I-athikili ibhalwe ukuthi ikusize ngokufundisa okulula kokulanda i-zoom yamawindi 10. Ngakho-ke, ngokuba ne-Zoom for windows 10 kwi-PC yakho noma kwi-laptop, uzokwazi ukuxhumana kangcono futhi ubambe iqhaza cishe.
Uhlelo lokusebenza le-Google Home ku-PC
Uhlelo lokusebenza lwe-Netflix lwe-Mac
bukela ama-movie amasha wokukhishwa online
ama-movie amasha agcwele mahhala
uwabonisa kanjani amaphesenti ebhetri ku-iphone
I-xbox ikhodi yamahhala eyodwa
khulula khulula amakhodi psn